समाचार विश्लेषण « नेपाली मुटु
Archive for the ‘समाचार विश्लेषण’ Category
Continue Reading मधेसीको बार्गेनिङ : माओवादीको जवाफ >>
कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजको पाँच बर्ष अगाडी देखि झुण्डिरहेको मुद्दाको आज फैसला भएको छ । पटक–पटक फैसला हुने भनिए पनि म्याद सर्दै आएको शोभराजको मुद्दा आज पनि टुङ्गिनेमा धेरैको सन्देह थियो । तर सबैको शंका विपरित उनलाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले थप १४ बर्षको जेल सजाय तोकेको हो । नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराउँन सक्छु भनेर नेपाली व्यवश्थालाई ठाडो चुनौती दिएका शोभराजको विगत अनि नेपालको कानुनी क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टचारको कारण उनले सजाय पाउँन कुरा एकदमै चुनौतीपुर्ण मानिएको थियो । तर अदालतको यो कदमले कानुनको खरिद बिक्री गर्नेहरुलाई गतिलो झापड दिएको छ । ३ दशकअघि उनको हातबाट मारिएकी अमेरिकी नागरिक कोन्निजो ब्रोनचिजको आत्मालाई बल्ल आफ्ना दोषीले सजाय पाएको देखेर शान्ति महसूस भयो होला । Continue Reading छिरेन एयरपोर्टबाट हात्ती >>
Posted in समाचार विश्लेषण |2Comments »
फड्को मार्दै नेपाली फुटबल, गर्न धेरै बाँकी छ
सन्तोष साहुखल-महगां खेलाडी
नेपाली फुटबलमा व्यावसायिकताको खोजी भइरहेका बेला २८ बर्षे पुरानो व्यावसायिक क्लब मनाङले फुटबलमा व्यावसायिकताको पुट हाल्ने कोशिश गरेको छ । क्लबलाई नयाँ ज्यान भर्न भन्दै ११ जना नयाँ खेलाडीलाई मालदार पारिश्रमिकमा क्लबमा भित्राएको हो । यसरी नयाँ आउँने खेलाडीमा थ्री स्टारका चार, एनआइबिएल फ्रेन्ड्स र जीफाइभ मच्छिन्द्रका २ र २, संकटा र एनआरटीका १ र १ खेलाडी छन्। गत महिना सम्पन्न लिगमा पाँचौ स्थानमा चित्त बुझाउँनु परे पछि ६ पटकको विजेता मनाङले यो कदम उठाएको हो । यी सबै खेलाडीलाई क्लबले मासिक १०,००० देखि ५०,००० सम्म दिएको छ । यसमा थ्रिस्टारका सन्तोष साहुखलको सबै भन्दा बढि मासिक ५०,००० पारिश्रमिक छ । नेपाली फुटबलको इतिहासमा खेलाडीले पाएको यो नै सबै भन्दा ठुलो पारिश्रमिक हो । कुल बार्षिक बजेट ६५ लाख भएको क्लबले खेलाडीको पारिश्रमिकमा मात्र ५० लाख खर्चेको छ । यो कदमबाट खेलाडीलाई व्यावसायिक खेलाडी बन्न पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ ।
तर बार्षिक बजेटको दुइ तिहाई खेलाडीको पारिश्रमिकमा खर्चिने थ्रीस्टारको कदम तपाईलाई चै कस्तो लाग्यो नि ? लेख्नुहोस् है । Continue Reading फड्को मार्दै नेपाली फुटबल, गर्न धेरै बाँकी छ >>
इराकको प्रतिबन्ध हट्यो, समाधान यही हो ?
छ बर्ष देखि नेपाली राहदानीमा ‘इराक बाहेक’ भनेर लेख्न थालिएको थियो । तर यही ‘इराक बाहेक’ भनेर लेखिएको राहदानी बोकेर तिस हजार भन्दा बढि नेपाली नागरिकहरु इराक पुगिसेकेका रहेछन् । अमेरिकन सेनाले गैरकानुनी कामदारलाई निकाल्ने भने पछि उत्पन्न भएको सन्त्रास नेपाल सरकारले पनि थाहा पायो । र, ६ बर्ष देखि लगाउँदै आएको इराक प्रवेशको प्रतिबन्ध आज हटायो । यो निर्णय अहिले इराकमा रहेका नेपालीलाई मात्र लागु हुने भनिएको छ । नयाँ कामदार जान र पठाउँन भने पाइदैन । यति भए पछि नेपाली कामदारहरुले अब कामबाट निस्किनु पर्दैन रे ।
गैर कानुनी हुदा–हुदै तिस हजार बढि नेपाली इराक पुग्दा पनि थाहा नपाउँने सरकारले ‘नयाँले नपाउँने’ भन्दा मात्र यो क्रम रोक्न सक्ला र ? एउटा समस्या त सल्टियो तर विगतमा जस्तै वा त्यो भन्दा खतरनाक समस्या नआउला भनेर कस्ले ग्यारेण्टी गर्न सक्छ ? यो बिषयमा नेपाल सरकारले सोचेको छ कि छैन ? नेपाल सरकार यो कदमलाई तपाई चै के भन्नुहुन्छ नि ? Continue Reading इराकको प्रतिबन्ध हट्यो, समाधान यही हो ? >>
Posted in समाचार विश्लेषण |5Comments »